Tantaran'ny Bricmaker - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Mahomby amin'ny fahaleovan-tena R&D JKY80 / 70-4.0 Hard-Plastika Double-Stage Vacuum Extruder, nitazona mialoha ny vokatra azo avy amin'ny tsena.
Niditra tao amin'ny tsenan'i Vietnam & Laos ny tetik'asa famahanana tunnel mihetsika ary nanomboka nihazakazaka.
Niditra tsena Vietnam ary nanangana orinasan'ny sampana tany ho an'ny varotra sy serivisy aftersales.
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa Bricmaker maodely sy faharanitan-tsaina, vokatra avo lenta, serivisy, teknolojia ary fitantanana nanohana tetikasa fampisehoana tena tsara, lasa mpitarika ny orinasa Bricmaker.
Tafaray miaraka amin'ny Oniversiten'i Zhejiang, nanangana ny Oniversiten'i Zhejiang - Ivontoerana R&D Machines Bricmaker manan-tsaina.
Teknolojia mandroso espaniola tsy an-kijanona ho an'ny fahazoana & fampiroboroboana ny fitaovana famokarana zavamaniry biriky manana fitoniana avo lenta, fahombiazana avo kokoa, angovo ambany ary lasa mpitarika ny vokatra nasionaly. Nanomboka ny fananganana zavamaniry manan-tsaina ary nampahafantatra ny tetik'asa fampirantiana nasionaly amin'ny vidiny lafo.
Mahaleo R&D Strong-Mixing Extruder modely an'ny SJ400x46, maodely Roller Crusher an'ny GS120x100, maodely Hammer Crusher an'ny PCX1210 ary andiana fitaovana fanodinana fitaovana miaraka amin'ny angovo ambany, fahombiazana avo lenta ary kalitao azo antoka, miantoka ny kalitaon'ny vokatra sintered avo lenta.
Teknolojia mandroso Italiana, mahomby R&D China modely farany mahomby indrindra amin'ny JKY75 / 65E-4.0 Hard-Plastika Double-Stage Vacuum Extruder, nitazona haingana mialoha ireo vokatra miteraka tsena.
Robot FANUC ambony iraisampirenena japoney namboarina, nifanaraka tamin'ny reducer SEW moto mandroso sy ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy herinaratra SIEMENS PLC an'ny Alemanina, nanamboatra rafitra an-tsokosoko ho an'ny mpiasa an-trano kilasy voalohany, ary niditra an-tsena tamim-pahombiazana, nitarika ny làlan'ny zavamaniry biriky famokarana miaraka tsy manam-pahaizana & manan-tsaina.
Nametraka foto-kevitra momba ny Supermarket, niditra tamin'ny vanim-potoana fampandrosoana haingana. Manangana vondrona manam-pahaizana manokana ho an'ny R&D rafitra fanapahana-fanangonana-fametrahana azy. Teknolojia mandroso any Etazonia, R&D modely voalohany an'ny JY75C-4.0 Hard-plastika Double-Stage Vacuum Extruder. Niitatra ny sehatry ny famokarana ary nifindra tany amin'ny Industrial Park.
Ivon-toerana milina biriky Zhejiang Xiehe biriky sy tile.
Xiaoshan Biriky & Tile Machines Factory nanangana Hangzhou Xiaoshan Xiehe Brick & Tile Machinary Co., Ltd.
Ny modely napetraka voalohany an'ny JKR45 / 40 Vacuum Extruder dia teraka.
Zhejiang Construction Materials Plant dia nanangana orinasa mpamokatra biriky Xiaoshan biriky sy taila.
Natsangana ary napetraka tao amin'ny famokarana, nametraka biriky sy taila ho an'ny fanamboarana ny Zhejiang Construction Materials Plant (an'ny fanjakana).